ဖိုင်:Editing Wikipedia brochure EN.pdf - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖိုင်:Editing Wikipedia brochure EN.pdf
Size of this JPG preview of this PDF file: ၄၂၀ × ၆၀၀ ပစ်ဇယ်. အခြား ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု: ၁၆၈ × ၂၄၀ ပစ်ဇယ် | ၃၃၆ × ၄၈၀ ပစ်ဇယ် | ၅၃၇ × ၇၆၈ ပစ်ဇယ် | ၁၀၅၀ × ၁၅၀၀ ပစ်ဇယ်။
စာမျက်နှာ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၉ ၂၀ ကို သွားရန်
မူရင်းဖိုင် ‎(၁၀၅၀ × ၁၅၀၀ pixels, ဖိုင်အရွယ်အစား: ၁၁.၅၅ MB, MIME အမျိုးအစား: application/pdf, စာမျက်နှာများ ၂၀ ခု)
ဤဖိုင်သည် Wikimedia Commons မှဖြစ်ပြီး အခြားပရောဂျက်များတွင် သုံးကောင်းသုံးလိမ့်မည်။ ယင်း၏ ဖိုင်အကြောင်းစာမျက်နှာ တွင် ဖော်ပြထားချက်ကို အောက်တွင် ပြထားသည်။
Commons သည် မူပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်သော မီဒီယာဖိုင်များ သိုလှောင်ထားရာ နေရာ ဖြစ်သည်။ သင်လည်း ပါဝင်ကူညီနိုင်ပါသည်။
ဖော်ပြချက်Editing Wikipedia brochure EN.pdf
ရက်စွဲ 2010-09-03, updated 2014-01-07
ရင်းမြစ် outreach:Welcome to Wikipedia (Bookshelf)/2013 edition (text for translation, Wikisource version)
စာရေးသူ Wikimedia Foundation
norsk (Norwegian) العربية (Arabic) català (Catalan) dansk (Danish) magyar (Hungarian) 中文（台灣）‎(Traditional Chinese)
PDF genesis This typeset was created with Scribus.
ဤဖိုင်ကို Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported လိုင်စင်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည်။
မျှဝေရန် – ဖန်တီးမှုကို ကူးယူရန်၊ ဖြန့်ဖြူးရန်နှင့် ထုတ်လွှင့်ရန်
ပြန်ရောနှောရန် – ဖန်တီးမှုကို ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းရန်
မှတ်ယူနိုင်ခြင်း – ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါက ဖန်တီးသူ သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရှိသူမှ သတ်မှတ်သော အမျိုးအစားကို လိုက်နာရမည် (ဆိုလိုသည်မှာ သင့်အား သို့မဟုတ် သင့်ဖန်တီးမှုတွင် အသုံးပြုခြင်းအား ထောက်ခံချက်ပေးသည်ဟု မဆိုလိုပါ)။
ထပ်တူမျှဝေ – ဤဖန်တီးမှုအား ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ထပ်ဆင့် ဖန်တီးခြင်း ပြုလုပ်ပါက ရရှိလာသော ဖန်တီးမှုကို ဤဖန်တီးမှုနှင့် သို့မဟုတ် ဆင်တူသော လိုင်စင်ဖြင့်သာ ဖြန့်ချိသင့်သည်။
copyright status အင်္ဂလိပ်
copyright license အင်္ဂလိပ်
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported အင်္ဂလိပ်
ဖိုင်ကို ယင်းနေ့စွဲ အတိုင်း မြင်နိုင်ရန် နေ့စွဲ/အချိန် တစ်ခုခုပေါ်တွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။
(အသစ်ဆုံး | အဟောင်းဆုံး) (ပိုသစ်သော ၁၀ ခု ⧼မှ⧽ ပိုဟောင်းသော ၁၀ ခု) အထိကြား ရလဒ် (၁၀ | ၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀) ခုကို ကြည့်ရန်
ကာလပေါ် ၁၆:၄၄၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄ ၁၀၅၀ × ၁၅၀၀, စာမျက်နှာများ ၂၀ ခု (၁၁.၅၅ MB) TFlanagan-WMF minor tweaks to integrate new cover and update design files.
၁၈:၅၆၊ ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄ ၁၀၅၀ × ၁၅၀၀, စာမျက်နှာများ ၁၁ ခု (၁၀.၃၇ MB) AKoval (WMF) Redesigned cover by User:Heather (WMF).
၁၅:၄၂၊ ၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄ ၁၀၅၀ × ၁၅၀၀, စာမျက်နှာများ ၁၁ ခု (၁၀.၃ MB) AKoval (WMF) Redesigned cover.
၂၃:၀၉၊ ၂၅ မတ် ၂၀၁၄ ၁၀၅၀ × ၁၅၀၀, စာမျက်နှာများ ၂၀ ခု (၁၂.၃၂ MB) TFlanagan-WMF minor update
၂၀:၂၄၊ ၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၄ ၁၀၅၀ × ၁၅၀၀, စာမျက်နှာများ ၂၀ ခု (၁၀.၈၆ MB) Ldavis (WMF) minor tweaks from designer
၂၁:၀၇၊ ၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၄ ၁၀၅၀ × ၁၅၀၀, စာမျက်နှာများ ၂၀ ခု (၁၀.၅၆ MB) Ldavis (WMF) Complete revamp of brochure
၁၇:၀၆၊ ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ ၁၀၃၉ × ၁၄၇၆, စာမျက်နှာများ ၂၀ ခု (၁၂.၀၉ MB) Sage Ross (WMF) I'm going to keep uploading these until I get it right.
၀၃:၀၇၊ ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ ၁၀၃၉ × ၁၄၇၆, စာမျက်နှာများ ၂၀ ခု (၁၂.၀၉ MB) Sage Ross (WMF) more updates and improvements
၂၃:၃၁၊ ၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ ၁၀၃၉ × ၁၄၇၆, စာမျက်နှာများ ၂၀ ခု (၁၂.၈၃ MB) Sage Ross (WMF) tiny format update
၂၁:၅၃၊ ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ ၁၀၃၉ × ၁၄၇၆, စာမျက်နှာများ ၂၀ ခု (၁၂.၈၃ MB) Sage Ross (WMF) updated version with statistics from August 2012 and other edits to reflect changes in the wiki
အောက်ပါ စာမျက်နှာ သည် ဤဖိုင်ကို အသုံးပြုထားသည်:
အောက်ပါ အခြားဝီကီများတွင် ဤဖိုင်ကို အသုံးပြုထားသည်-
av.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
de.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
Benutzerin Diskussion:BS Thurner Hof
Benutzer Diskussion:Albrecht Conz
Benutzer Diskussion:Olaf Simons
Benutzer Diskussion:Sebastian Sandig
Benutzer Diskussion:Freimut Bahlo/Archiv
Benutzer Diskussion:Robin Moebius
Wikipedia Diskussion:WikiProjekt Literatur/Archiv3
Benutzer Diskussion:Patrick Stützel/Archiv/1
Benutzer Diskussion:Ab Theben
Benutzer Diskussion:Gustav von Aschenbach/Archiv/2014
Benutzer Diskussion:Alien Mel
Benutzer Diskussion:Graf zu Pappenheim/Archiv/2014
Benutzer Diskussion:Das Einhorn
Benutzer Diskussion:Hedwig Storch/Archiv/2014
dk.wikimedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
At bidrage til Wikipedia
el.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
Βικιπαίδεια:Πανεπιστημιακά Εγχειρήματα/Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας/Πάντειο Εαρινό 2011
Βικιπαίδεια:Πανεπιστημιακά Εγχειρήματα/Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας/Πάντειο Χειμερινό 2011
en.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
Wikipedia:Tutorial (historical)/Wrap-up and more info
Wikipedia:WikiProject United States Public Policy/Courses/Spring 2011/Media and Telecommunication Policy (Jonathan Obar)
Wikipedia:WikiProject United States Public Policy/Courses/Spring 2011/Policy Analysis (Christopher Cooper)
ဤဖိုင်ကို အခြားနေရာများတွင် အသုံးပြုထားမှုများအား ကြည့်ရှုရန်။
ဤဖိုင်တွင် သတင်းအချက်အလက် အပိုများ ပါဝင်သည်။ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာ သို့ စကင်နာများက ထည့်ပေါင်းပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။
အကယ်၍ ဖိုင်ကို မူရင်းအခြေအနေမှ ပြုပြင်လိုက်ပါက အသေးစိတ်အချို့သည် ပြုပြင်ထားသောဖိုင်တွင် အပြည့်အစုံ ပြန်ပါလာမည်မဟုတ်။
ဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းသည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန်
၀၈:၀၅၊ ၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄
ဖိုင်အပြောင်းအလဲ ရက်စွဲနှင့် အချိန်
Adobe PDF Library ၁၀.၀.၁
၅၀၄ x ၇၂၀ pts
"https://my.wikipedia.org/wiki/ဖိုင်:Editing_Wikipedia_brochure_EN.pdf" မှ ရယူရန်
Wikimedia Commons တွင် ကြည့်ရန်